Toamasina : 50 000 ireo hahazo sosialim-bahoaka | NewsMada
Toamasina : 50 000 ireo hahazo sosialim-bahoaka
Manomana ny fandaminana ny fizarana sosialim-bahoaka indray ny ekipa rehetra ao Toamasina. Omaly, nisy ny fivoriana notarihin’ny governor, ny prefet, ny solombavambahoaka niaraka amin’ny ben’ny Tanàna sy ny Fid ary ny tompon’andraikitra eny anivon’ny fokontany natao tao Mangarano ho fandaminana ity hetsika ity.
Ivondronan’ny tompon’andraiki-pahefana rehetra ny fandaminana mba tsy hisy ho tompon-trano mihono sy hampazava tsara ireo fandaminana apetraka.
Hentitra ny fepetra noraisina amin’ny tsy maintsy hanavaozana tanteraka ny lisitr’ireo hisitraka izany sosialim-ba­hoaka izany. Tokantrano marefo maherin’ny 50 000 no heverina hisitraka izany ao amin’ny faritra Atsinanana ankoatra ireo 60 000 efa nahazo tamin’ireo andiany roa teo aloha.
Tsy tokony hisy ny kiantranoantrano eo amin’ireo lehiben’ny fokontany izay mampitaraina fatratra ny mponina toy ny miseho eto Antananarivo. Ao anatin’ny mangarahara no tokony hanaovana ny lisitra ary ireo tsy mbola nahazo hatramin’izay mihitsy no hojerena manokana indray amin’ity sosialim-bahoaka andiany manaraka ity.